Ifektri kadoti | I-China Trash Manufacturers, Abahlinzeki
Nge-O shape trash can nge-step pedal 10L LJ-1636
Umgqomo kadoti weLONGSTAR, wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Kulula ukuyisebenzisa, Uma isinyathelo kancane phansi, isivalo sasizovuleka. Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile.
Udoti oyindilinga ngesitebhisi esinezinyathelo 4L (S) LJ-1639
Udoti oyisikwele unezinyathelo zesinyathelo 12L LJ-1637
Amanxiwa kadoti (L) CH-6370
Round udoti ikani nge isinyathelo isinyathelo 6L (L) LJ-1638
Amanxiwa kadoti (S) CH-6536
I-LONGSTAR Minions trash can, yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Kulula ukuyisebenzisa, vele ubeke isikhwama semfucumfucu emgqonyeni kadoti kulungile. Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Udoti oyindilinga ungaba ne-LJ-1660
Umgqomo kadoti weLONGSTAR, wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Kulula ukuyisebenzisa, vele ubeke isikhwama semfucumfucu emgqonyeni kadoti kulungile; Ngamandla aphezulu, ilusizo impela empilweni yansuku zonke.
Amabhakede wokugcina amabhakede CH-6537
ILONGSTAR Minions desktop storage bucket, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Ingasetshenziswa njengesibhamu sedoti ledeskithophu, kulula ukusisebenzisa; Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Nge-D shape trash can nge-step pedal LJ-1672
Nge-O shape trash can nge-step pedal LJ-1673
Imfucumfucu kadoti ngesinyathelo sesinyathelo 8L (L) LJ-1630
Umgqomo kadoti weLONGSTAR, wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside. Kulula ukuyisebenzisa, Uma isinyathelo kancane phansi, isivalo sasizovuleka. Ngokubushelelezi, kulula ukuyihlanza, futhi izizwa ikhululekile. Ngamandla amakhulu, ilusizo impela empilweni yansuku zonke.
Udoti oyisikwele ngesinyathelo sokunyathela i-LJ-1675